Mogadishu Journal » Magacaabista gollaha wasiirada oo dib u dhac ku yimid
Mjournal :- Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa la filayay in isku shanadheyn iyo xil kaqaadis ku sameeyo qaar kamid ah golaha Wasiirada maamulka Galmudug si loo dar dar galiyo howlaha badan ee horyaala maamulkaasi.
Waxaa dib u dhac ku yimid isku shaandheyn Madaxweynaha ku sameyn lahaa Golaha Wasiirada Galmudug, waxa uuna Madaxweynaha oo kulan deg deg ah la qaatay Xildhibaanada Galmudug ka codsaday in waqti dheeraad ah siiyaan.
Madaxweynaha Galmudug ayaa sababta uu dib ugu dhigayao magacaabista iyo isku shaandheynta golihiisa Wasiirada lagu sheegay mid uu ku doonayo in uu ku qanciyo Kooxda Ahlu Sunna oo iyadu wali diidan jiritaanka maamulka Galmudug.
Xaaf ayaa doonaya in uu wadahadalo nabadeed la yeesho kooxda Ahlu Sunna ee maamusha qeybo kamid ah gobolka Galgaduud, waxa uuna Madaxweynaha doonayaa in uu kooxdaasi ku qanciyo tiro badan oo kamid ah golaha Wasiirada Galmudug.
Waxaa marar badan fashil ku dhamaaday Wadahadalo la doonayay in lagu heshiisiiyo Ahlu Sunna iyo Galmudug, Madaxweynaha cusub ee Galmudug ayaana wali ka quusan in maamulkiisa baahiyo kuna soo daro kooxda Ahlu Sunna.